Kodzero-dzevanhu, 13 Ndira 2017 page 1
Chishanu 13 Ndira 2017
Kusavepo kweSyllabus Muzvikoro Kwokonzera Mutauro
Sangano iri rinoti dambudziko remuzvikoro rawedzerwawo zvakare nekuwedzerwa kwezvimwe zvidzidzo zvitsva kusekendari zvinoti asi pasina varairidzi vatsva.
Gakava reMapurazi Rosimuka Zvakare paKuchemwa kwaVaChanetsa
Gurukota rezveminda nekugariswa kwevanhu kumaruva, VaDouglas Mombeshora, vakayambira vakuru vakuru vebato reZanu PF kuti vasaite hudyire hwekuda kukumba mapurazi vachipa vana vavo nemadzisahwira avo.
Matare Otanga Kunzwa Nyaya dzeVakasungwa Mukuratidzira Gore Rapera
Matare atanga kunzwa nyaya dzenhengo dzeMDC-T uye vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekuratidzira kusafarira hurumende yemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezvehupfumi.
VaTsvangirai Voona Kugadzwa kweMutungamiri Mutsva weGhana
VaNana Addo Dankwa Akufo-Addo, avo vaive mutungamiri webato raipikisa muGhana, reNew Patriotic Party, vakakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi gore rapera.
Hurumende Yobvuma Kuti Kuwaniswa Chikafu Kuri Kuitwa Zvine Rusarura Mukati
Komisheni inoona nezvekodzeero dzevanhu, yeZimbabwe Human Rights Commission, inoti hurumende yakabvuma kuti pari kuitwa zvematongerwo enyika pakugoverwa kwechikafu munzvimbo dzine nzara munyika
Kuenda kwaVaMugabe kuZororo Nyika Ichinetseka Kokonzera Mutauro
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemhuri yavo vari kuzororo kunyika dzekumabvazuva dzakaita seSingapore neChina.
Kanzuru yeHarare Yoshorwa neKushandisa Kambani Inotevera Zvikwereti
Kanzuru yakapa basa iri kukambani yeWell Cash mushure mekukundikana kuwana mari dzayo dzinodarika mamiriyoni mazana mashanu emadhora iri mumapazi ehurumende, makambani pamwe nevagari.
Makomba Azara Mumigwagwa Orwadza Vakawanda
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nezvivakwa, Doctor Joram Gumbo, vanoti mukutanga kwegore rino vari kutanga mabasa ekugadzira migwagwa mikuru yakaita seHarare kusvika kuChirundu uye weBeitbridge kusvika Victoria Falls.
VaMnangagwa Vanovimbisa Rubatsiro kuVanhu Vakawirwa neTsaona yeDutumupengo Idai